admin – Page 135 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home»Entries posted by admin (Page 135)
Xiddig ka tirsan Liverpool oo xiiseynaya ku biirista PSG
By admin on 02/11/2018 Wararka Ciyaaraha HNN
Jimco,November 2, 2018(HNN) Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dhibaato kala kulmeysa saxiixeeda cusub ee Fabinho kaasoo diyaar u ah inuu u dhaqaaqo kooxda Paris Saint-Germain marka la gaaro bisha January. Reds ayaa saxiixa laacibkan ku garaacday kooxda PSG suuqii xagaaga xilligaas oo ay Monaco kala soo saxiixdeen iyagoo ku bixiyay qarash dhan £43.7m. Ha yeeshee […]
Manchester oo beddelka De Gea ka dhex aragtay gudaha Premier League-ga
jimco, November, 2, 2018(HNN) Goolhayaha kooxda Manchester United ee David De Gea ayaa ku jira bilihii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa, walow kooxda ay fursad u heysato inay hal xilli ciyaareed oo dheerraad ah ay ku darto heshiiskiisa. Xiddigga reer Spain, waxa uu aad uga caga jiidayaa inuu saxiixo heshiis cusub oo nagi kaga sii dhigaya […]
Immisa ciyaaryahan oo Barcelona ka tirsan ayaa kasoo muuqday kooxda bisha ee La Liga?
Jimco, November, 2, 2018(HNN) Inkastoo ay si gaabis ah ku billlaabatay xilli ciyaareedkeedan cusub, haddane waxa ay soo yara karaar qaadatay bishii October ee dhowaan soo idlaatay. Waxa ay guuleysatay laba kullan oo is xigta oo La Liga, waxaana ka horreeyay kullan bareejo ay galeen. Waxay 1-1 la gashay Barca kooxda Valenica, waxaase guul 4-2 […]
Wax ka ogow 15-kii sano ee lasoo dhaafay xiddigaha ku guuleystay abaalmarinta Golden Boy Award
Jimco, November, 2, 2018(HNN) Abaalmarinta Golden Boy Award waxaa bixisa shabakadda Taliyaaniga ah ee Tuttosport, waxaana ay soo billaawday sanaddii 2003. Waxaa sidoo kale codeynta abaalmarintan ka qayb qaata shabakado kala duwan oo ka kasoo kala baxa dalal kala duwan, sida : Bild (Germany), Blick (Switzerland), A Bola (Portugal), l’Équipe (France), France Football (France), Marca (Spain), […]
Chelsea Oo Sababtan Awgeed Isaga Daynaysa Soo Qaadashada Aaron Ramsey.
jimco, November, 2,2018(HNN) Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa maalmihii u danbeeyay lala xiriirinayay soo qaadashada xidiga qadka dhexe Arsenal kaga ciyaara ee Aaron Ramsey. Ramsey oo uu qandaraaskiisu ku egyahay dhammaadka xilli ciyaareedkan ayaa xiisa k helayay qaar kamid ah kooxaha ugu awodda badan qaaradda sida, Juventus, PSG, iyo Chelsea. Ai kastaba ha ahaatee, Daily […]
Akhriso: Shuruudo la hor dhigay musharixiinta u tartamaya madaxweynaha Koonfur Galbeed
By admin on 02/11/2018 Wararka HNN
Jimco, November, 2, 2018(HNN) Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa soo saaray shuruudaha laga rabo Musharaxiinta u taagan doorashada Madaxweynaha ee dhici doonta 17-ka bisha November. Shuruudaha ayaa waxa ka mid ah inuu yahay muwaadin Soomaali ka soo jeeda deegaanada Koofur Galbeed, isla markaana aanu qabin Xaas Ajnabi, in aanu gelin dambi culus oo ay […]
Akhriso: Duqii degmada Baladweyne oo xilka laga qaaday iyo hal arin oo lagu eedeeyay
Jimco, November, 2, 2018(HNN) Duqii degmada Baladweyne Cali Cabdulqaadir Faarax ayaa xilka laga qaaday kadib wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle. Duqa degmada Baladweyne ayaa loo magacaabay Khadar Xassan Afrax. Ciise Cabdi Ciise. Hiilnews.com Ciisecc12@gmail.com
SAWIRRO: Wasiirka waxbarashada XFS oo daah furay mashruuc kor loogu qaadayo xirfadda farsamada gacanta
By admin on 01/11/2018 Wararka HNN
khamiis, November, 1, 2018(HNN) Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah uga daah furay mashruuc kor loogu qaadayo xirfadda farsamada gacanta. Munaasabadda daah furka barnaamijkan waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xassan, danjiraha Jarmalka, ee dalalka Soomaaliya, […]
SAWIRO: Maxkamada Ciidamada oo xukuntay rag dhac ka geystay Muqdisho
Khamiis, November, 1, 2018(HNN) Aweys Cali Macalim iyo Ayaanle Axmed Nuur ayaa si wada jir ah loogu soo qabtay iyagoo dhac u geysanayo muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku sugnaa degmada Cabdi-caziiz ee gobalka Banaadir. Labada eedeysane ayaa dhac u geystay Wiil dhallinyara ah oo kamid ah kuwa ku shaqeysto xirfadda sawirrada ee nolal maalmeedka ka raadiyo […]
DHAGEYSO: Degmadda Jamaame iyo Deegaanadda ka agdhow oo Maleeshiyaadka Al Shabaab laga saarayo.
Khamiis, November, 1, 2018(HNN) Saraakiisha Ciidanka qalabka sidda ee ku sugan Deegaanadda Dowladda Goboleedka Jubbaland ayaa bilaabay Qorshayaal Maleeshiyaadka Al Shabaab looga saarayo meelaha ay kaga sugan yihiin Jubbaland. Korneel Cabdiqaadir Ibraahim Ixsaaq oo ah Taliyaha qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ee ka howlgala Jubbaland oo lahadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in arrintan sidda […]